Ikhaya iimveliso DataNumen Word Repair ILizwi linamava ngempazamo xa uzama ukuvula ifayile
Ulwazi oluneenkcukacha malunga "neLizwi elinamava ngempazamo xa uzama ukuvula ifayile" Impazamo
Xa uvula uxwebhu lweLizwi elonakeleyo ngeMicrosoft Word 2003, ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo:
ILizwi lifumene impazamo xa lizama ukuvula ifayile.
Zama ezi ngcebiso.
* Jonga iimvume zefayile kuxwebhu okanye uqhube.
* Qinisekisa ukuba kukho imemori yasimahla kunye nediski.
* Vula ifayile ngesiguquli sokubuyisa iZibhalo.
Ngamanye amaxesha iLizwi liya kuba nakho ukubuyisa imixholo yemixholo kuxwebhu olonakeleyo, kodwa iindawo eziseleyo azinakufunyanwa. Kwimeko enjalo, unokusebenzisa kwakhona DataNumen Word Repair ukubuyisa la malungu.
Isampulu ifayile yoxwebhu lweLizwi eya kubangela impazamo. Impazamo6_1.doc
Ifayile ilungiswe nge DataNumen Word Repair: Impazamo6_1_fixed.doc